Nepali Christian Bible Study Resources - विकृत ईसाई सङ्गीतको आवाज
» आत्मिक सङ्गीत (MP3) » विकृत ईसाई सङ्गीतको आवाज
हरेक सङ्गीत शैली (style) को आफ्नै सन्देश हुन्छ। त्यसैले गलत सन्देश बोकेका सङ्गीत शैलीहरू ख्रीष्टिय सङ्गीतलाई सुहाउँदैनन्।
"रक सङ्गीतका प्रमुख तत्वहरू भनेको यौन र अभद्र बात हुन्", रक कलाकार डेबोरा ह्यारी भन्छिन्। संसारले कामवासनाकै लक्ष्य राखेर रचेको सङ्गीत पवित्र परमेश्वरको आराधनाको लागि सुहाउँदैन। ख्रीष्टियन सङ्गीत आत्मिक हुनैपर्छ, शारीरिक होइन (१ कोरिन्थी ३:१)।
कामुक नाचको पछाडि अक्षरलोपिकरणयुक्त सङ्गीत हुन्छ, जसको ताल वा बीटले त्यो चिनिन्छ। यू-ट्यूबमा कामुक नाँच शैली भएका नेपाली ईसाई भिडियोहरूले के बताउँछन्? पूर्वेली शैलीमा होस् या पश्चिमेलीमा, नेपालका मण्डलीहरू संसारसित एकनासे बन्न होडबाजी नै चलेको भान पर्छ। पश्चिमेली शैलीको कुरा गर्दा, रक कलाकार फ्रान्क जाप्पा भन्छन्, "रक सङ्गीत भनेको यौन हो। त्यसको ठूलो बीट शरीरको तालसँग मिल्छ।"
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ? के छ त्यस्तो त्यो रक सङ्गीतमा कि विशेष गरी युवा युवतीहरू त्यसमा यति आनन्द लिन्छन्, नशामा मत्त भएजस्तै गरी? पप, रक सङ्गीतमा भएको नशा सृजना गर्ने तत्त्व सिन्कोपेशन (syncopation) हो। तलको अडियो सन्देशमा मैले यसलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु।
साथै, माइक्रोफोनलाई मुखको ज्यादै नजीक राखेर सास फेराइ समेत सुनिने गरी गीत गाउनेले कामुकताको सन्देश दिइरहेको हुन्छ। कामुक स्वर शैली नाइट क्लब र डिस्कोलाई सुहाउला तर परमेश्वरको आराधनाको लागि सुहाउँदैन। अर्को उदाहरण: रिसाहा स्वर शैलीमा गाउनु रक सङ्गीतकारको लागि स्वभाविक होला किनभने रक सङ्गित विद्रोहको आवाज हो, तर विद्रोह त सुसमाचारको सन्देशसित मेल खाने कुरा होइन।
निम्न अडियो सन्देशमा यी कुराको चर्चा गरिन्छ।
 आधुनिक ख्रीष्टिय सङ्गीतको आवाज (67 min; 17 MB)
यसको पहिलो भाग: सङ्गीत विवेचना-१
यसको दोस्रो भाग: सङ्गीत विवेचना-२
नाँचमा उहाँको स्तुति गर - यसको माने के हो? के होइन?
« सङ्गीत विवेचना (भाग २)
सङ्गीत: जाँचेर थाह गर »